Sprinter nifatratra tamin’ny kamiao – RN 7: olona roa maty tsy tra-drano, maro ireo naratra | NewsMada
Vokatry ny fandehanana mafy sy ny tsy fahampian-torimaso teo amin’ny mpamily ny taksiborosy Sprinter iray no nahatonga ny lozam-pifamoivoizana namoizana ain’olon roa, tao Ambohipihaonana, Ambatolampy, omaly maraina.
Maty tsy tra-drano tamin’izany ny olona miisa roa: ny mpamily ilay taksiborosy sy ny vehivavy, mpandeha iray, 37 taona, taorian’ny mpamily. “Mpandeha fito kosa naratra mafy”, hoy ny loharanom-baovao iray hafa. Vokany, nalefa namonjy toeram-pitsaboana ao Ambatolampy ireo niharam-boina raha nalefa teny amin’ny tranom-paty kosa ny razan’ireo namoy ny ainy. Raha ny fanazavan’ny zandary any an-toerana, nifandona tamina kamiao iray tsy nitondra entana avy eto Antananarivo hamonjy an’Antsirabe io taskiborosy io. Niezaka ihany ilay kamiao niala ilay fiara kanefa mafy ny fifandonana ka nifatratra tamin’ilay kamiaobe io ihany. Mafy dia mafy ny fifandonana. Manaporofo izany ny fahapotehina goavana teo amin’ny lohan’ilay taksiborosy Sprinter. Toy ny korotam-by sisa ny vatany. Voa mafy, araka izany, ilay mpamily ka izay no nitarika ny fahafatesany. Tahaka izany koa ilay mpandeha nipetraka taoriany.
Araka ny fanazavan’ny zandary, ankoatra iretsy olona roa namoy ny ainy, tsy dia nisy naninona loatra ireo mpandeha sisa tao anatin’ilay taksiborosy, ankoatra ireo olona fito, voalaza fa naratra mafy. Ny mpamily ilay kamiao no re fa tapa-tanana.
Nivoaka ny hopitaly
Araka ny fantatra, omaly tolakandro ihany no nivoaka ny hopitaly ireo naratra miisa fito raha nentin’ny fianakaviany namonjy ny Renivohitra kosa ny iray amin’izy ireo. Voalaza nandritra izany koa fa efa any amin’ny fianakaviany avy ireo vatmangatsiaka miisa roa.
Nosokafana avy hatrany fanadiahadiana mahakasika ny tranga ary atolotra ny fitsarana ny raharaha aorian’izay.
Ankoatra izay, fiara iray no nivarina teny an-tanimbarin’Ampitatafika, omaly hariva. Voalaza fa niala bisikileta ilay fiara, antony nahatonga ny loza. Tsy nisy kosa ny aina nafoy nandritra izany. Namonjy ireo niharam-boina ireo fokonolona tany an-toerana taorian’izay.